Banaanbax Bin Ladin loogu duceeynayey oo ka dhacay magaalada London (sawiro) – SBC
Banaanbax Bin Ladin loogu duceeynayey oo ka dhacay magaalada London (sawiro)
Boqolaal banaanbaxayaal ah ayaa maanta isagu soo baxay banaanka safaarada Mareykanka ee magaalada London kuwaasi oo halkaasi ducooyin & ALLE bari ugu sameeyey hogaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Ladin oo dhawaan ciidamada Mareykanku ku dileen wadanka Pakistaan. Banaanbaxayaashu waxay dhawaqayey ereyo lidi ku ah Mareykanka, waxaana ay wateen boorar ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada ka taagan wadamada Ciraaq & Afgaansitan.
Boorarkii ay wateen banaanbaxayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa “Islaamku wuxuu oo qabsan doonaa aduunka oo ilid”, iyagdhoo Mareykanka ku tilmaamay dilaa isla markaana waxay ka digeen inay dhici doonaan weeraro. Banaanbaxayaashu waxay kaloo ku dhawaaqayeen“ Mareykanow naarta ku dhac, Obama naarta ku dhac” & ereyo kale oo caro ka muuqatey.
Banaanbaxa ayaa ku soo aaday wax yar uun ka dib markii lagu dhawaaqay in weeraradii 7/7 ee ka dhacay tareenada dhulka hoostooda mara & bas magaalada London sanadkii 2005-tii dadkii ku dhintey ee tiradoodu gaarayso 52 qof ay ku dhinteen si sharci daro ah. Go’aankaasi maxkamada ku dhawaaqdey ee Royal Court of Justice, 3 mile meel u jirta mid ka mid ah banaanbaxayaasha Muslimiinta oo magaciisa ku soo koobay Abu Muaz, 28 sano jirna ah ayaa saxaafada ka hor dhawaaqay isagoo ku qaylinaya “Reer Galbeedku waa cadow”.
Kooxda dawlada UK ay xaarantinimaysa oo lagu magacaabo al-Muhajiroun & koox isku magacdey Muslimiinta ka soo horjeeda duulaanka oo banaanbaxaasi soo abaabulay ayaa ugu baaqay dawlada Mareykanka inay soo celiso meydka Bin Ladin ayn ku wareejiso qoyskiisa. Banaanbaxa oo ka dhacay fagaaraha Grosvenor Square ee bartamaha magaalada London waxaa la soo dhoobay boqolaal ciidamada Britain kuwaasi oo ay fooda is dareen ciidamada Booliiska walow inta badan banaanbaxu uu ahaa mid nabadeed.
Banaanbaxayaasha ayaa duco & quraan aqris waxay halkaasi ugu sameeyeen Hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin, iyagoo isagu jirey rag & haween, iyadoo haweenku si gaar ah u siteen dharka xijaabka ee hablaha Muslimiinta qaataan.
Laakiin waxay xaaladu faraha ka bixi gaartey ka dagaal markii xubno ka mid ah kooxda lagu magacaabo English Defense League oo ah urur wadankan aad looga neceb yahay oo aan sharci aheyn ay yimaadeen goobta ay ku banaanbaxayeen Muslimiinta. Ururka EDL waa urur aan taageero badan ka haysan dadka British-ka fikradihiisa waxay aad u faquuqaan Muslimiinta, isagoo aaminsan in muslimiintu yihiin argagixiso & diin dagaal.
Kooxda EDL ee maanta timid goobtii ay ku banaanbaxayeen Muslimiinta waxay wateen boorar & halku dhegyo ay ku cambaareynayaan Islaamka, iyagoo sidoo kale gubay sawirada Osama Bin Ladin.
Boqolaal Booliis ah ayaa lagu soo xoojiyey goobta banaanbaxayaashu isugu yimaadeen iyagoo kala dhexgaley kooxdii Muslimiinta & xubnaha EDL iyagoo si nabad ah ku soo dhameystey banaanbaxyadoodii qolo kasta.
Saraafada Mareykanka, safaaradaha kale ee reer Galbeedka & xarunaha muhiimka ah ee dawlada ee wadanka UK amaankooda aad ayaa loo adkeeyey tan iyo markii uu soo baxay warka dilka Osama Bin Ladin.